Tag: Ọbịbịa oge | Martech Zone
Tag: oge ​​ọbịbịa
Maka ndị ahịa anyị na-etinye ego na ikpo okwu nyocha a na-akwụ ụgwọ, enwere nnukwu nloghachi na itinye ego ebe ọ bụ na ha na-emejupụta atụmatụ na mwekota nke nyiwe ndị ahụ na-enye n'elu na karịa Google Analytics. Nke ahụ kwuru, anyị enweghị onye ọ bụla nke B NOTGH running na-agba ọsọ Google Analytics, n'agbanyeghị. N'ihi gịnị? N'ihi na Google Analytics nwere adịghị mma uru nke mwekota na Google+, Webmaster na Adwords data. N'ezie, ọ nwere uru adịghị mma nke ịghara ịnweta
Maka Ulo oru, Mgbasa ozi ohuru adighi mfe
Wednesday, June 9, 2010 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Social media dị mfe. Ihe ochicho njini ka odi nfe. Gingde blọgụ dị mfe. Kwụsị ikwu ya. Ọ bụghị eziokwu. Teknụzụ dị egwu. Companieslọ ọrụ ndị a na-alụ ọgụ na-agba mbọ na teknụzụ leverage na ọwa ọhụụ iji nweta nsonaazụ dị mma. Ọtụtụ na-agbahapụ ya ma ọ bụ na-ezere ya kpamkpam. N'ịntanetị, ọchụchọ na mgbasa ozi ọha na eze abụghị obere egwu. Twitter dị mfe, nri? Kedu otu o siri sie ike iji pịnye mkpụrụ edemede 140? Ọ bụghị ... ma ọ bụrụ na ị na-kekọtaworo n'ebe ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ